MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardမတ် 2022 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: မတ် 2022
MPT သည် ပြည်သူများ တွေ့ကြုံနေရသော ရေပြတ်လပ်မှုအခက်အခဲများကို သက်သာစေရန် ရန်ကုန်မြို့၏ အချို့နေရာများတွင် သောက်သုံးရေလှူဒါန်းခြင်း လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်) –MPT သည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် အရေးပါသော တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန် ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် အကောင်းဆုံး ကြိုးပမ်းမှုများဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ပေးအပ်နေသည့်အပြင် “အတူလက်တွဲအမြဲရှိမည် MPT” ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် လိုအပ်သောအကူအညီများကို တိုးချဲ့ကာ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုလိုကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အတွက် အရေးပါသော သောက်သုံးရေ ပေးဝေလှူဒါန်းမှုမှာ ယခုလိုကာလအတွင်း အထူးသဖြင့် ပူပြင်းသည့် နွေရာသီနှင့် ရေပြတ်လတ်မှုကိုခံစားနေရသူ ပြည်သူများအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်သည့် ရေအလှူကို လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ရေပြတ်လပ်မှု ကြုံတွေ့နေရသည့် မြို့နယ်အချို့ နှင့် ရန်ကုန်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများတွင် ရေလှူဒါန်းမှုပြုရန် စီမံချက်သည် ၁၇ ရက်ခန့် ကြာမြင့်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး MPT အနေဖြင့် ရေဂါလံ ၁ ဒသမ ၁ သန်းကျော် ထောက်ပံ့နိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားကာ ရန်ကုန်မြို့၏ မြို့နယ်အချို့ရှိ မိသားစုပေါင်း ၅၉,၄၀၀ ၏ ရေအခက်အခဲကို သက်သာရာရနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်၊၊
အဆိုပါ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွင် MPT သည် လိုအပ်သောနေရာများသို့ ရေဖြန့်ဝေပေးရန်အတွက် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ (၆)ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းကာ လှိုင်သာယာ၊ ထန်းတပင်၊ အင်းစိန်၊ ရွှေပြည်သာ၊ သာကေတ၊ မရမ်းကုန်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ အရှေ့ဒဂုံ၊ ခရမ်း၊ သံလျင်၊ ကျောက်တန်း၊ သုံးခွ၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို၊ ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်း နှင့် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်များ အပါအဝင် (၂၂) မြို့နယ်ခန့်ကို အထောက်အပံ့ပြု လှူဒါန်းနိုင်မည်ဟု ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
ရေလှူဒါန်းမှုစီမံချက်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်မှ စတင်ခဲ့ကာ ၁၇ ရက်ခန့်အထိ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ယခုလို ပူပြင်းသောနွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ၊ ချက်ပြုတ်ရေးနှင့် အခြားနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုများအတွက် ရေလိုအပ်နေသော မြို့နယ်များကို ပေးဝေလှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကာ ပြည်သူများမှကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို သက်သာရာရစေရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ရေလှူဒါန်းမှုစီမံချက်လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံအချို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
တောင်ဉက္ကလာပမြို့နယ်အတွင်း ရေပေးဝေ လှူဒါန်းနေစဉ်
ဒလမြို့နယ်အတွင်း ရေပေးဝေ လှူဒါန်းနေစဉ်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်း ရေပေးဝေ လှူဒါန်းနေစဉ်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်အတွင်း ရေပေးဝေ လှူဒါန်းနေစဉ်
MPT ၏ များပြားလှသော CSR လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက http://mpt.com.mm/en/about-home-en/csr-activities/ သို့လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်၊၊
သုံးစွဲသူများသည် MPT အကြောင်းကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက MPT ၏ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး 106 Call Center သို့ ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်သည့်အပြင် မိမိသိရှိလိုသည်များကိုလည်း တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန် ဖြေကြားပေးမည့် Chatbot ဝန်ဆောင်မှုများကို MPT Viber ၊ MPT Telegram ၊ MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း နှင့် MPT တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်တို့တွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Author ThazinPosted on မတ် 30, 2022 မတ် 30, 2022 Categories CSR Activitiesmm, Latest Newsmm, Press Releasesmm
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်နယ်ရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လင်းခေး အိတ်ချိန်း ၆-၄-၂၀၂၂ ၀၈၁-၈၇xxx ၀၈၁-၂၃၈၇xxx
ပင်လုံ အိတ်ချိန်း ၂၄-၄-၂၀၂၂ ၀၈၁-၃၀၀xxx ၀၈၁-၂၃၀၀xxx
Author ThazinPosted on မတ် 25, 2022 မတ် 25, 2022 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
“ကြင်ကြင်နာနာ” ပက်ကေ့ချ်၏ ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်တွင် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ကို လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပြီဖြစ်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်)-MPT သည်မကြာသေးမီကထွက်ရှိထားသော “ကြင်ကြင်နာနာ” ပက်ကေ့ချ်၏ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ MPT အနေဖြင့်သုံးစွဲသူများ၏အဆင်ပြေချောမွေ့မှုသည်ကျွန်တော်တို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ MPT သည်သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုအနီးစပ်ဆုံးကိုက်ညီမှုရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိပြီး၎င်းတို့၏နေ့စဉ်ဘဝများကိုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
“ကြင်ကြင်နာနာ” ပက်ကေ့ခ်ျ၏ ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွင် MPT ၏ လူကြိုက်အများဆုံး ဒေတာပက်ကေ့ချ်ဖြစ်သည့် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်၏ဒေတာများကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် ယခုလက်ရှိ “ကြင်ကြင်နာနာ” ပက်ကေ့ခ်ျ၏ဒေတာများ သာမက Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များမှ ဒေတာပမာဏများကို ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များထံ လက်ဆောင်များအဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးပြီး မိမိချစ်ခင်ရသူများသို့ ကြင်နာမှုများကို ပြသနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT သုံးစွဲသူများသည် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များ၏ ဒေတာပမာဏကို မျှဝေရန်အတွက် အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
1. MPT4U အတွင်းရှိ Kyin Kyin Nar Nar ပက်ကေ့ချ် အတွင်းသို့ဝင်ရောက်၍ “Data Transfer”Section အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပါ။ “Kyin Kyin Nar Nar Pack”၏ဘေး တွင်ရှိသော “Down Arrow”
2. Kyin Kyin Nar Nar Pack နှင့် Data Carry Plus Pack အား တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
3. Data Carry Plus Pack အားရွေးချယ်၍ပေးပို့လိုသော အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဒေတာပမာဏ အားရွေးချယ်ကာ “လွှဲပြောင်းသည်” ကိုနှိပ်ပါ။
4. OTP ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
5.မှန်ကန်သော OTP ထည့်သွင်းပြီးနောက်တွင် ပေးပို့မှုအောင်မြင် ကြောင်း တွေံရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ဒေတာမျှဝေခံစားနိုင်မည့် “ကြင်ကြင်နာနာ” ပက်ကေ့ချ်များသည် သုံးစွဲသူများမှ ၎င်းတို့၏ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ချစ်ခင်ရသူများကို အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဒေတာမျှဝေပေးခြင်း၊ လက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းစသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အထူးပေါင်းစပ်ထားသော ပက်ကေ့ချ်များ ဖြစ်ပါသည်။
“ကြင်ကြင်နာနာ” ပက်ကေ့ချ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသုံးစွဲသူ (ပိုင်ရှင်) များသည် ပက်ကေ့ချ် အမျိုးအစားအလိုက် အများဆုံး အဖွဲ့ဝင် ၅ ယောက်အထိ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ထည့်သွင်းပြီးပါက အဖွဲ့ဝင်(၁)ဉီးလျှင် ဒေတာ 500MB စီ အလိုအလျောက် မျှဝေပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဒေတာများ (ကြင်ကြင်နာနာဒေတာနှင့် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်မှ ဒေတာပမာဏ 500 MB အထိ) ကို အဖွဲ့ဝင်များသို့ လွှဲပြောင်းရန်အတွက် သုံးစွဲသူများသည် ကြင်ကြင်နာနာ ပက်ကေ့ခ်ျများနှင့် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များကို စာရင်းသွင်းရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်းကို MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ကြင်ကြင်နာနာ (2,998 Pack) ဝယ်ယူမှု နှင့် Data Carry Plus မှ ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်း ပုံစံမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
“ကြင်ကြင်နာနာ” ပက်ကေ့ချ်ပိုင်ရှင်များသည် ဆုလက်ဆောင်များ ရရှိခံစားနိုင်ရန် MPT 4U အက်ပလီကေးရှင်း တွင် “ထိပေါက်” ၁ ကြိမ် ကစားခွင့် ရမည် ဖြစ်သည်။
ဆွေသဟာ/ ရှယ်ပြော/ ရွှေစကား ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ် ရယူသုံးစွဲထားသော MPT GSM/ WCDMA ကြိုတင် ငွေဖြည့်စနစ် သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် “ကြင်ကြင်နာနာ” ပက်ကေ့ချ်များကို ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“ကြင်ကြင်နာနာ” ပက်ကေ့ချ်များကို ရယူနိုင်ရန် သုံးစွဲသူများသည် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းကို iOS အသုံးပြုသူ များအတွက် 1.4.9 version ၊ Android အသုံးပြုသူများအတွက် 4.4.0 version အဖြစ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ http://bit.ly/DataFreeApp သို့မဟုတ် https://lotaya.mpt.com.mm/event/191 တွင် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်မည် (သို့မဟုတ်) USSD ကုဒ် *4040# သို့ ခေါ်ဆို၍ ရရှိလာသည့်လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ဒေတာခကျသင့်ခြင်းမရှိဘဲ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT သည် ၎င်း၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံများ ဆက်လက် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် နည်းလမ်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်နေပြီး မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ၏ ဒီဂျစ်တယ် လူမှုဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် လိုအပ်သော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပေးအပ်ရန် အမြဲကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။
Author ThazinPosted on မတ် 14, 2022 မတ် 14, 2022 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT Pay အက်ပလီကေးရှင်းမှ တစ်ဆင့်အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး (Auto-renewal) ပက်ကေ့ချ်များကို ဝယ်ယူပြီး အထူးလက်ဆောင် “၅၀ % ပြန်အမ်းငွေ” ရရှိနိုင်ပြီ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်)- MPT Pay သည် သုံးစွဲသူများအတွက် MPT Pay အက်ပလီကေးရှင်း မှတစ်ဆင့် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုး ပက်ကေ့ချ် (Auto-renewal) များ ဖြစ်သော “Data Carry Plus” နှင့် “All in one ထောဘီ ၁၀ ဆ” ကိုဝယ်ယူလျှင် MPT Pay ၏ အထူးလက်ဆောင် ပြန်အမ်းငွေ E-money ၅၀% ရရှိမည့် အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက် မှ ဧပြီလ ၁၂ ရက်အထိ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပက်ကေ့ချ်များအတွက် E-money “၅၀% ပြန်အမ်းငွေ” အစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်ရန် သုံးစွဲသူများသည် MPT Pay အက်ပလီကေးရှင်းထဲရှိ “ဖုန်းငွေဖြည့် နှင့် ဒေတာ” icon မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ Auto-renewal ပက်ကေ့ချ်များသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ဒေတာပြတ်လပ်မှုကို စိတ်ပူရန်မလိုဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး (Auto-renewal) ပက်ကေ့ချ်နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ထပ်ဆောင်းအကျိုးခံစားခွင့်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
မူလဒေတာ ပမာဏ (ဒေတာပမာဏ ရက် ၃၀ သက်တမ်း) (MB)
“၅၀% E-money ပြန်အမ်းငွေ” (ကျပ်)
Auto Renewal Data Carry Plus
၄၇၀ - ၄၉၀
E-money ၅၀ % ပြန်အမ်းငွေ ကို တစ်ကြိမ်သာခံစားခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်
၆၁၅ - ၆၄၀
Auto Renewal All in One Htaw B 10x ၂,၉၀၀
MPT Pay မှတစ်ဆင့် ပထမဆုံးအကြိမ် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပက်ကေချ့်ဝယ်ယူသူများသည် E Money ပြန်အမ်းငွေ 50% ကို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ *၂ကြိမ်နှင့်အထက် ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အပိုလက်ဆောင် ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ပုံမှန်ဒေတာ (သို့) ပုံမှန်ထောဘီ ပမာဏကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး (Auto-renewal) ပက်ကေ့ချ်များ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ၅၀ % E-money ပြန်အမ်းငွေကို ၂ ရက်အတွင်း MPT Pay Wallet အကောင့်သို့ ထည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။ ပြန်အမ်းငွေ ခံစားခွင့်များကို ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေထုတ်ယူခြင်း၊ ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူခြင်း၊ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း အစရှိသည်တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။
အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များကို ရယူနိုင်ရန် သုံးစွဲသူများသည် MPT Pay Wallet အကောင့်ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပြီး MPT Pay အက်ပလီကေးရှင်းကို https://bit.ly/MPTPayAndroid (Android အသုံးပြုသူများအတွက်) နှင့် https://bit.ly/MPTPay_iOS (iOS အသုံးပြုသူများအတွက်) တို့မှတစ်ဆင့် ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်၍ ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
MPT Pay သည် လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံး မိုဘိုင်းလ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၁၀ မှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၂၈,၀၀၀ ကျော်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်ကွန်ရက်ဖြင့် လည်ပတ်နေပါသည်။ သုံးစွဲသူများအတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေမည့် MPT Pay ၏ နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အီလက်ထရောနစ်စနစ်သုံး ငွေကြေးလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည့် Mobile Wallet ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း၊ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း၊ MPT နှင့် အခြားသော အော်ပရေတာများသို့ ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းခြင်း နှင့် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များဝယ်ခြင်း၊ ဈေးဆိုင်များတွင် ငွေပေးချေခြင်း၊ ငွေတောင်းခံလွှာများ ပေးချေခြင်း၊ MPT Pay ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များတွင် ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း၊ AYA ဘဏ် နှင့် CB ဘဏ်များ၏ ATM တွင် ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ လူအများသို့ ငွေထုတ်ပေးခြင်း နှင့် လစာပေးခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု နှင့် ပင်စင်ဝန်ဆောင်မှုများ အပြင် အခြားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လုံခြုံစွာနှင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
MPT Pay နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက MPT ဖုန်းနံပါတ်များအတွက် MPT Pay Call Center 990 နှင့် အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 01-2323990 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Author ThazinPosted on မတ် 14, 2022 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Author ThazinPosted on မတ် 12, 2022 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Author ThazinPosted on မတ် 10, 2022 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ငါန်းဇွန် အိတ်ချိန်း ၁၁-၃-၂၀၂၂ ၀၆၆-၄၆xxx ၀၆၆-၂၀၄၆xxx
နေပြည်တော် လယ်ဝေး အိတ်ချိန်း ၁၃-၃-၂၀၂၂ ၀၆၇-၃၀xxx ၀၆၇-၈၀၃၀xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အလုံ အိတ်ချိန်း ၁၄-၃-၂၀၂၂ ၀၇၁-၃၀xxx ၀၇၁-၂၀၃၀xxx
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ထူးကြီး အိတ်ချိန်း ၁၈-၃-၂၀၂၂ ၀၄၄-၃၃xxx ၀၄၄-၂၀၃၃xxx
အင်္ဂပူ အိတ်ချိန်း ၂၀-၃-၂၀၂၂ ၀၄၄-၃၀xxx ၀၄၄-၂၀၃၀xxx
(မြောက်ပိုင်း) သိန္နီ အိတ်ချိန်း ၃၁-၃-၂၀၂၂ ၀၈၂-၆၃xxx ၀၈၂-၂၉၆၃xxx
နောင်မွန် အိတ်ချိန်း ၃၁-၃-၂၀၂၂ ၀၈၂-၃၅xxx ၀၈၂-၂၉၃၅xxx
Author ThazinPosted on မတ် 3, 2022 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm